Mayelana NATHI - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.
IZhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd.,eyasungulwa ngo-2004, ingumkhiqizi okhethekile wePVC odongeni nophahla lwamapaneli, ukubunjwa kwe-PVC foam, amaphrofayli we-PVC / WPC kanye ne-PVC / WPC yangaphandle, evumelana nokuvikelwa kwemvelo. Imboni yethu itholakala eduze nezindawo ezinhle zeMogan Mountain eWukang, eDeqing, esifundazweni saseZhejiang. Kunamakhilomitha angama-45 ukusuka eNtshonalanga Lake eHangzhou namakhilomitha ayi-160 ukusuka eMetropolitan city-Shanghai. Ngakho-ke ezokuthutha ezikule ndawo zilula kakhulu.
Sine onjiniyela kanye nochwepheshe ezingaphezu kuka-30 ngubani onguchwepheshe ekuthuthukiseni imikhiqizo emisha. Imikhiqizo yethu inganeliseka ngezicelo zamakhasimende. Zonke izinhlobo zezinhlobo, amaphethini nemibala esiyithuthukisile ihola imfashini emkhakheni wokuhlobisa waseChina. Sinezitolo zamaketanga ezingaphezu kuka-140 futhi sinamalungelo obunikazi abaningana e-china. Imikhiqizo yethu ingatholakala emhlabeni wonke njengeYurophu, Middle East, Asia naseMelika.
Uma unesithakazelo kunoma imiphi imikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane. Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwane bebhizinisi namakhasimende avela emhlabeni wonke!
Ucezu lokuqala lwePaneli ye-PVC enomkhiqizo weHuazhijie lwazalwa, olugcwalisa imakethe yepaneli engenalutho yekhwalithi ephezulu e-china.
Deqing Huazhijie Decoration material co., LTD. yasungulwa.
IZhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd. yasungulwa. Hlela ukukhulisa nokukhuthaza ubuchwepheshe be-PVC ne-WPC Foam ngohlobo lweHuaxiajie.
Inkundla yokusebenzela engu-2 yafakwa ekukhiqizeni. Indawo yokusebenzela ifinyelele ku-30000 square metres ngokuphelele.
Uthole isitifiketi se-ISO9001: 2000 esikhishwe yi-SGS.
Inkundla yokusebenzela engu-3 yafakwa ekukhiqizeni. Indawo yokusebenzela ifinyelele ku-40000 square metres ngokuphelele.
Abaholi beDeqing County Party Committee noHulumeni Wesifunda bavakashela i-Huaxiajie Company futhi bazwakalise ukuthi bazokhuthaza futhi basekele ukuthuthukiswa kweHuaxiajie yethu.
IHuaxiajie ihambele Isithangami Sezomnotho se-Asia-Pacific se-11.
IHuaxiajie izuza uphawu oluphezulu oluhlanganisiwe lwophahla lwaseChina.
Inkampani yethu ibinomugqa wokukhiqiza osezingeni eliphakeme ovela eJalimane nase-Italy, amandla aphelele wonyaka angaphezu kwamamitha ayizigidi ezi-5 odonga lwamapulangwe e-PVC nophahla lwamapulangwe, imikhiqizo engaphezulu kuka-6,000MT PVC, neminye imikhiqizo engaphezulu kuka-2,000MT. Imikhiqizo yethu inezinzuzo ezisobala ngamandla amakhulu, ubufakazi bokubola, okokushisa umlilo, ubufakazi obumanzi, ukumelana nomthelela, ukumelana nomsindo, ukufakwa okulula, nokugcinwa okulula njalonjalo. Ingasetshenziswa ngaphezu kweminyaka engama-30 ngaphandle kokuguga noma ukubuna futhi inezinhlobo ezahlukahlukene ezisebenza kuzo zonke izinhlobo zamahhotela, izakhiwo zamahhovisi, izibhedlela, izikole, izitshalo zezimboni, izakhiwo zezentengiselwano, izindawo zokudlela kanye nemizi yokuhlala efana nomhlobiso wangaphakathi.